Zuva re14 Keto Challenge Review - Chimiro Chidzo
musha » Keto » 14 Zuva Keto Challenge Review
The 14 Zuva Keto Challenge iri chirongwa chitsva chokudya chakagadzirwa nekutengesa kwakanyora munyori uye CISSN anozivikanwa noutano hwakanaka Joel Marion. Icho chimwe chezvakasiyana-siyana zvakasiyana-siyana zvekudya zvirongwa zvaunogona kuwana paIndaneti. Ichi chirongwa chitsva chokudya chichaita kuti muviri wako ugoita kuti uve mafuta ekupisa moto mukati memasvondo e2. Iyi hurongwa hutsva inoderedza kudya kwehydrohydrates uye kuwedzera huwandu hwemafuta ane ushamwari mumuviri womunhu. Pano chirongwa chitsva iwe uchadzidza nezveboka rakakosha re "mafuta akawanda" uye kuti mafuta aya achakubatsira sei kudurura mapaundi akawanda mudiki semazuva 14. Mimwe yeiyi inonzi "mafuta akawanda" zvokudya zvinosanganisira zvido zvakadai sebhekoni, mafuta, mafuta ane mvere, uye mazai evha. Ichi chitsva chezuva re14 hachina chokuita neAtkins uye hachisi zvakasiyana nechekare chekudya ketogenic chirongwa.
Chimiro cheketo kudya chinotungamirira kuchikamu chinonzi ketosis. Ketosis inyika inoshandiswa nemagetsi inoratidzwa nemakumbo akakura emitumbi inowedzera mumuviri maviri. Nokuderedza zvakaderedza kudya kwako kwecarb, uye kutora ma carbs aya nenzira yakakodzera yemafuta ane ushamwari, tsika yeketo yekudya ichaita kuti muviri wako uite ketone yehuni inobatsira muviri wako kuti unyatsopisa mafuta kuitira simba. Inonzwa zvakanaka zvakanaka? Zvakanaka pane zvakaderera kune izvi ... uye chimwe chinhu vanhu vanotanga kunetseka pamusoro pekutanga kutanga chirongwa chekudya. Yaro inonzi Keto chirwere.
Chii chinonzi Keto Flu?
Keto chirwere ishoko rinoshandiswa kurondedzera zviratidzo zvinoputika-firi zvinosanganiswa nekutanga pari-low carb ketogenic based diet plan. Neketo chirwere, munhu angava nematambudziko makuru kusanganisira kusuruvara, kuvimbiswa, kunetseka kwezvokudya, misoro yepamusoro, kusuruvara kwemitsipa, uye kushaya simba kwemineral. With the 14 Zuva Keto Challenge iwe haufaniri kunetseka nezvekutarisana nezvengozi dzinobatanidzwa neKeto chirwere. Chimwe chimiro chetsika chekudya keto ndeyekuti dzimwe nguva zvinogona kutora kusvika mwedzi kuti munhu apinde "chechokwadi" ketosis. Kunyange kana nokuda kwechimwe chikonzero muviri wako unokwanisa kupinda ketosis muvhiki, chikuru chakanyanya kunze kweketo chirwere ndechekuti tsika yeketo chirongwa haisi kuchinja uye hazvina musoro kuti uve muhutano hwekusingaperi kwenguva refu. Kunze kwekusava kwechokwadi, hurumende yekusetoni isingaperi haina utano hwomuviri wako kwenguva refu.
Zuva re14 Keto Challenge chirongwa chezvokudya ndiyo yakanakisisa yekugadzirisa tsika dzekudya keto. Mumuviri wako uchakwanisa kubudisa ketone, uye iwe haungapfuuri kuburikidza ne ketosis. Hungu, iwe wakanzwa izvo zvakarurama ... iwe uchiri kugamuchira ALL yezvishamiso zvinoshamisa zvemuviri wako unobudisa ketoni PASINA chaizvoizvo uri muchokwadi ketosis.
Pane chirongwa chekudya keto, iwe metabolism inogona kutanga kunonoka mukati memazuva e7-10 nekuda kwekushayiwa kweglucose pakusadya carbs. Izvi zvichange zvichikonzera matambudziko emahomoni anokonzerwa nekupisa mafuta. Mhinduro yedambudziko iri inosanganisira kudya "keto carbs" panguva dzakakodzera. Izvi zvakafukidzwa zvakazara zvizere muZuva reZ14 Keto Challenge chirongwa chekudya! Nechirongwa ichi chekudya, uchafumura chokwadi pamusoro pekuti "keto carbs" inogona kuenzanisa sei nekuvandudza mahomoni ako nekuchengetedza mafuta zvakanaka.
BASA ROKUSHANDISA ZUVA RA14 KETO DAMBUDZIKO:
Iwe uchada kudya keto-based carbohydrates kuti uchengete uye uvandudze metabolism yako. Zvimwe zvezvibatsiro zvekushandisa iyi 14 zuva keto dambudziko dzinosanganisira:
- Muviri wemushandi uchanyatsopisa glucose yakawandisa inowanikwa mumakhahydrates. Izvi zvinoita kuti chiropa chivambe kushandiswa kwekugadzira ketone zvakare zvakare.
- Mahomoni ane mimba yakakosha aka cortisol yako inotanga kudonha.
- Utachiona hwetachiona hwakarongeka zvakanaka (izvi ndizvo zvinokonzera kushandiswa kwemasabolism)
- Kuwedzerwa kwesimba
- Usingaitizve kutarisana nekusazokwanisa kuisa pfungwa
- Kuvandudzika kwezinga re insulin iyo inotungamirira kumazinga emafuta ari pasi mumuviri
- Izvi zvinokonzerwa nekudya zvakasikwa hazvina keto chirwere chinoshandiswa nevashandi vechiketa kudya. Iwe uchakwanisa kunakidzwa nekushanduka patsva mumuviri wako pasina chakaipa "keto madhara"
- Kudya kunobvumira muviri kuchinja mafuta akachengeterwa simba. Kuparara kwemafuta hakuzomboperi kuburikidza neketosis.
- 14 zuva keto zvinetso zvekudya zvinokubvumira kudya uye kunakidzwa nekudya kwako kunofarira. Iwe haufaniri kuzvidzivirira kubva pakudya kwakakura kwecarbhi kana muviri wako uri mugaba wekotone yekubudisa.
CHII CHINOITA KUTI UZIVE ZUVA RA14 KETO DAMBUDZIKO:
Ichi chirongwa chekudya kwezuva nezuva che14 chinopa zvakawanda zvekubatsira munguva pfupi. Iwe haufaniri kuve wakagadzirirwa neketo kudya kweupenyu hwose. Zvimwe zvezvikonzero nei iwe ungasarudza kushandisa chikafu ichi kuti zvive nani uye zvinokurumidza zvitsva ndezvi:
- Iwe uchakwanisa kunakidzwa nezvose zvaunofarira mafuta mapuroteni chero bedzi iwe uchitsvaga zvakagadzirwa nyama.
- Unogona kunakidzwa newaunofarira zvakanyanya kudya kwekate chero bedzi iwe unosanganisira "keto carbs". Izvi zvinosanganisira kudya chibereko pamwe chete! Iwe, zvisinei iwe uchada kuziva nguva yakakodzera yekudya zvikafu izvi kuti uvandudze mafuta ako kupisa simba iyo chinhu icho chidzidzo ichi chinozara zvakakwana.
- Iyi 14 zuva keto purogiramu haina maitiro akareba kwenguva refu ayo angagadzirisa zvaunokwanisa. Izvi zvakasiyana nedzimwe tsika dzekudya keto dzinobatsira zvikuru.
- Chirongwa ichi chichakubatsira kuti uwane hutonda hwakakosha
- Unokwanisa kutora bhuku iri pakarepo sezvo iripo mu PDF yekuti iwe unogona kutanga pakarepo
- Unogona kufarira zvinodhaka zvako zvinodhaka nekurega doro rinowedzera mafuta ekuchengetedza uye rine shuga yakawanda. Iri urongwa hwezuva re14 rinoratidza kuti doro rinodhaka raunogona kunwa
- Zviri nyore kushandisa nekuda kwe "tarisa keto"
- Unogona kunakidzwa nezvinhu zvako zvaunofarira kamwechete pavhiki usina kuwana mafuta kana wanyatsonzwisisa kuti izvi zvinoshandiswa sei kuti zvishandise
- Urongwa urwu huri nyore kutevera nguva refu uye hunosanganisira minerals, michina, uye zvinoshandiswa zvinodzivirira kukanganisa zvakajairika mumutambo wekudya keto
- Kana iwe usati wagutsikana nenzira ipi neipi iyi 14 Day Challenge inouya iyo yakazara 60 yemari yemasikati rekugadzirisa chikwereti kuitira kuti iwe urege kurasikirwa!
Tinofunga kuti chirongwa ichi chakanaka uye ndicho chakanakisisa chemuviri wako kwenguva refu. Kana wakanga uchironga kuenda keto chero nguva pfupi, iva nechokwadi chokuti chengetedza iyi 14 Day Keto Challenge kutanga nekuti inouya nechepakati pangozi uye ichiri kugadzirisa mhinduro! Kana iwe uchirayira nhasi iwe uchazowana 4 FREE bhonasi zvipo nekuraira kwako! Uchagamuchira eBooks ye4 bonus iyo inosanganisira bhuku rekushandisa, keto snacks uye hacks, mutungamiri wepadheti chekunyengedza, uye hurongwa hwekutsanya mukati.